समानान्तर Samanantar: May 2009
न्युजरुममा तन्देरीहरूका कुरा सुन्दै काम गर्न रमाइलो त हुन्छ उनीहरूसँगै जोतिन खोज्दा उमेर ढल्केको ज्यानलाई सास्ती पनि उत्तिकै हुने रहेछ । धान्न धौ धौ नै पर्ने ।
अन्नपूर्ण पोष्ट छाड्दा (२०६३ जेठ )सोचेको थिएँ अखबारमा कामचाहिँ अब गर्दिन । बाल अधिकारका क्षेत्रमा नै पूरै समय दिएँ करिब ३ वर्ष। स्वयंसेवीका रूपमा संलग्न संस्थामा काम गरेबापत पैसा लिनुहुन्न भन्ने आफैँले उभ्याएको पर्खाल नाघ्ने कुरा भएन । ठूला मध्ये गनिने युसेप र रगमार्क नेपालको संस्थाको अध्यक्ष भएर ठूलाठूला कुरा गरे पनि हातमुख जोर्न टाकनटुकन बनीबुतो गर्नैपर्ने । धन्न, साथीहरूको सहयोगले जागिर खाँदाजस्तै कमाइ भइरयो । केही नयाँ काम थालियो । कतै डोब छाडियो । कतै डुंगा भइयो । विपश्यनादेखि अयोध्यासम्म पुगेँ । जुम्लादेखि जर्मनीसम्म गएँ । नातिको साथी भएर बसेँ ।
एक प्रकारले फुक्का थियो दिनचर्या । अझ फुक्का हुने रहरले युसेप छाडेँ । रगमार्कको पदावधि सकियो । यत्तिकैमा कान्तिपुरका साथीहरूले नयाँ अखबार सुरु गर्ने समाचार सुने । कुन्नि किन तरुणहरूको हुलमा मिसिएर काम गर्ने रहर लाग्यो । नारायणजीलाई भने । दैनिकीमा पुगेपछि म पनि मिसिएँ । साथीहरू थपिए । अनलाइन सुरु भयो । झन् रमाइलो र रोमाञ्चक पनि । आधारातमा पनि समाचार/विचार अपलोड गर्ने जाँगर चल्ने । आफूले नसके साथीहरूसँग इमेल गुहार माग्ने । दैनिकीमा गाली पनि सबैभन्दा धेरै खाएँ । लेखको अर्थ नै नबुझी खनिए पाठकहरू । नयाँ विधाको अनुभव नमजा चाहिँ लागेन । अनि नेपाली अनलाइन पत्रकारिता ब्लग संस्कृतिबाट थालिएकाले त्यसैको सेरोफेरोमा रुमल्लिएको छ । पाठक पनि पत्रकार पनि । अखबार ब्लग होइन बुभ\_mन - बुझाउन अझै सकिएको छैन ।
यस्तैमा पत्रकारको टोली नै नागरिकमा आयो । आधुनिक र उदार विचारको तर गम्भीर प्रस्तुति नागरिकको विशेषता बनाउने सल्लाह भएको छ । पाठकको भने चटपटे खोज्ने बानी छ । सम्पादकको अखबारलाई जीवनसँग जोड्ने चाहना छ । पाठकहरूको आआफ्नै अर्थ र अपेक्षा छ । यथार्थमा अखबारलाई सम्पूर्ण पत्रिका बनाउन खोजिएको छ । र यो सबैलाई पत्रकार बनाउने प्रयास पनि हो । अभिव्यक्तिको अवसर उत्तरदायित्वको भारी पनि हो ।
वर्णाश्रम पछ्याउने हो भने त उमेरले घरबार छाड्ने बेला भएको हो । जागिर खाने धेरै दौँतरीले उहिल्यै पेन्सन पाइसके । आफूले यौवनको ऊर्जा खर्चेको राजनीतिमा नै पनि रमाएर बस्नेले कमाएकै देख्छु । खेतीपाती नै गरेर बसेको भए पुर्खौली जमिन बाँकी हुन्थ्यो । अब उमेर पुग्यो बसीबसी खान्छु भने पनि बेच्दै खाँदै गर्न केही वर्षपुग्थ्यो । केही वर्षो गर्जो र्टार्न सकेको भए भइहाल्थ्यो । सन्तान हुर्किइसके । पीर नमाने पनि पाप नलाग्ने र गाल नपर्ने भइसक्यो । नाम र दाम कमाउने रहर पनि छैन । दामको लोभ कहिल्यै लागेन । नामको भोक पनि नमेटिँदै टरेर गयो । यसैले यो सास्ती किन रमाइलो लागेको हो बुझेको छैन - र कुन दिन दिक्क लाग्ने हो त्यो पनि ठेगान छैन ।
Posted by Govinda at 5/17/2009 05:43:00 AM No comments:
Labels: मनका कुरा
Posted by Govinda at 5/17/2009 05:29:00 AM No comments:
विधि कि सहमति
बालकृष्ण समको एउटा कथामा भनिएजस्तो हुन थाल्यो देशको अवस्था। परदेश गएको एउटा पात्र घरबाट आएको चिठीको अर्थ बुझ्दैन। मूलभन्दा टीका गाह्रो र टीकाभन्दा तेसको व्याख्या झन् गाह्रो भयो भन्ने गुनासो गर्छ । घरमा सबै अनर्थ मात्रै भएको हुन्छ।
जेभयो सबै गलत भयो। माओवादीले 'नागरिक सर्वोच्चता'को नाम लिएर आफ्नो सर्वसत्तावाद लाद्ने निर्णय गरे। अरू दलले लोकतन्त्रको नाम लिएर संसदीय लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साए। राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न भन्दै त्यसैलाई संकटमा पारे। सबैले नकाम गरे।
सरकार, दलहरू वा राष्ट्रपतिमध्ये एकले मात्रै पनि बाटो र धर्म नछाडेको भए मुलुक आजको अवस्थामा आउने थिएन। अरूबाट त हैन राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रको मर्यादा राखिने अपेक्षा थियो। राष्ट्रपति सरकारका सबै अंगका संरक्षक हुन् तर उनका सल्लाहकार राज्यका अंगहरू नै हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हुन्।
राष्ट्रपतिको पत्रको भाषा रकमी छ। कानुनविद्को मस्यौदा होला। पत्रमा दुई अनुच्छेद छन् र वाक्य पनि २ वटा नै छन्। पहिलो वाक्यमा के भन्न खोजिएको हो स्पष्ट नै बुझिदैन। अर्को अनुच्छेद वाक्य पनि स्पष्ट छैन। 'अलग' लेख्नुपर्नेमा 'अलगत' लेखिएको छ । पत्रको हैसियत के हो? राजनीतिक हो कि कानुनी? नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुन धाराको उल्लंघन भयो र कुन धाराले राष्ट्रपतिलाई यो पत्र लेख्ने अधिकार दियो भन्ने पत्रबाट देखिँदैन। तजबिजमा केही गर्ने अधिकार त राष्ट्रपतिलाई अवश्य पनि छैन। ज्ञानेन्द्रले धारा १२७ को व्याख्या गरेकैजस्तो भयो। राष्ट्रपतिको यस गल्तीले माओवादीका सबै अपराध छोपिने भए।
शासन सहमतिमा हैन विधिअनुसार हुनुपर्छ। प्रधान सेनापति हटाउन दलहरूबीच सहमति भए मिल्ने र सहमति नभएकाले नमिल्ने अर्थ उनको पत्रमा छ। सबैभन्दा मूल गल्ती नै यस प्रकरणमा यही हो। कानुनसम्मत भए सहमति नभए पनि हटाउन हुन्छ। र कानुनविपरीत भए राज्यका सबैले भने पनि हटाउन हुँदैन। राष्ट्रपतिको धर्म सबै सहमति भए असंवैधानिक काम पनि गर्न दिने त हैन होला।
आशा गरौँ, केही समयपछि स्थिति शान्त होला। कुनै न कुनै निकास निस्कला। संविधान र लोकतन्त्रसम्मत। त्यति बेला पनि यही सहमति भट्ट्याउने मूर्खता नहोस्। विधिको शासनमात्र लोकतान्त्रिक हुन्छ। सहमतिको, प्रधानमन्त्रीको वा राष्ट्रपतिको हैन विधिको शासन कायम हुनुपर्छ। माओवादीको संयमको परीक्षा हो यो। उनीहरूको नियत सर्वसत्तावाद लाद्ने हैन भने धेरै उतर्सिनु आवश्यक छैन। शासनको सबै पक्षमा विफल माओवादीका लागि खारिने मौका हो पो दियो समयले। अब कमल थापाको संगत र भरमा सरकार चलाउने मूर्खता नगर्नु। किनबेचको वामदेव सूत्रको पछि नलागे माओवादीको सहयोगबिना संविधान बन्न त परैजाओस् सरकार पनि चल्दैन।
अर्को पटक पनि लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्नैपर्ने भयो। सम्भवतः गिरिजाबाबुकै जीवनकालमा। यो उनको सबैभन्दा ठूलो विफलता हो।
Posted by Govinda at 5/04/2009 01:29:00 AM 1 comment:
Labels: जे नहुनु पर्थ्यो
वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साहले केही दिन पहिले नै फेसबुकमार्पुत् १ मेका दिन वागमती सरसफाइ कार्यक्रममा भाग लिन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल सहभागी हुने सूचना उनले सगर्व गरेका थिए । माओवादीले १ मेका दिन ठूलो जुलुस निकाल्ने हल्ला केही दिनदेखि चलेको थियो । जुलुसपछिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड प्रमुख वक्ता हुने व्यापक प्रचार गरिएको थियो ।
दुवै कार्यक्रम भए तर प्रमुख अतिथि भनिएका प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने उपस्थित भएनन् । उनी पुगेछन् - लप्सी फेदी देउरालीस्थित वाइल्ड लाइफ रिसोर्टमा । दलबलसहित । माओवादी लडाकुका कमान्डरहरुसहितको ६० जनाको हुल लिएर शान्ति खोज्न । उनीसँग नन्दकिशोर पुन र चन्द्रदेव खनाल रहेछन् । दाहालका पत्नी र छोरा त हुने नै भए ।
केही दिन पहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक छाडेर वरिष्ठ मन्त्रीहरुको दलबलसहित दाहाल डकुमेन्ट्री हेर्न गएका थिए । त्यति बेला महत्वपूर्ण काम छाडेर समय खेर फालेकोमा उनको आलोचना भएको थियो । हुनत यस्ता आलोचनाले उनलाई छुँदैन । छुने भए प्रधानमन्त्री निवासका छिमेकीको गुनासो पनि उनले सुन्थे नि । प्रधानमन्त्री निवासमा बालिएको फोहोरको धुवाँले वरपर बसिनसक्नु भएको गुनासो छिमेकीहरुले एक जना सांसद मार्पुत गरेका रहेछन् र सांसदले धुवाँको मुस्लाको तस्बिरसहित प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको जानकारी पनि दिएका थिए रे । फोहोर बाल्दा निस्केको धुवाले दमका रोगीले ज्यान जान सक्छ । तर अरुको ज्यानको माया भए त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनै सक्ने थिएनन् ।
यति नै बेला बाराको परवानीपुरदेखि अमलेखगन्जसम्मका वासिन्दा दिनभर बन्द र रातभर कर्पुयुको मारमा परेका छन् । कति बेला कामकाज गर्ने कुनबेला किनमेल गर्ने अरु त अरु बिरामी परे ओखतीमुलो कसरी गर्ने सरकार छ छैन उनीहरुलाई थाहा छैन । थाहा भए नै पनि काम छैन । कारण सरकारले जनताको कष्ट थप्नेबाहेक अरु काम गरेको अहिलेसम्म जनताले थाहा पाएका छैनन् । उता अनि तिनै जनताले दिएको मतबाट सत्तामा पुगेका पुष्पकमल दाहालचाहिँ ६० जनाको हुल लिएर रिसोर्टमा जान्छन् शान्ति खोज्न । कस्तो विडम्बना !
प्रधानमन्त्री दाहाल निकै तनावमा छन् रे । उनको गुनासो छ नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न प्रधान सेनापति हटाउन खोज्दा सबैले असहयोग गरे । अरु त अरु सत्ताका साझेदारसमेत सहमत भएनन्। उनलाई सरकारका सहयोगीले असहयोग गरे । प्रमुख विपक्षीले त झन् कामै गर्न दिएन । त्यसमाथि विदेशी शक्तिले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर थप दबाव दिए । यति धेरै दबाव परेपछि तनावमा हुनु स्वाभाविकै हो । तर त्यो तनाव उनको आपुनै आर्जन हो । यसैले कम्तीमा दाहालले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन ।
राम्रो काम गरे तनाव हैन शान्ति हुन्छ । कर्णालीका भोकमरी पीडितलाई खाद्यान्नको बन्दोबस्त मिलाउन ध्यान दिएको भए सन्तोष हुन्थ्यो होला । रामहरि श्रेष्ठदेखि प्रचण्ड थैवसम्मका राजनीतिक कार्यकर्ता वीरेन्द्र साहदेखि उमा सिंहसम्म साचारकर्मीका हत्यारालाई न्यायको कठघरामा उभ्याएको भए मनमा केही त गरेँ भन्ने हुने थियो । मनमा यसै शान्ति हुने थियो ।
कांग्रेसमा फुट पार्नका लागि लगाएको समय र गरेको परिश्रम घरजग्गा फिर्ता गर्नमा लगाएको भए शिर ठाडो पार्ने ठाउँ हुने थियो । नेपालका प्रधानमनत्रीलाई संसारकै सबैभन्दा बढी ढँटुवा भन्ने कसैको आँट हुने थिएन । सुजातालाई सरकारमा ल्याउँदैमा कांग्रेस चूप लाग्छ भन्ने ठानेको हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल परेर पनि नचेत्ने मूर्खको कोटीमा दरिने छन् । एमाले र फोरमले कुन पो साथ दिएको छ र विधिको शासन कायम भएमा कांग्रेसले चुँ गर्न सक्ने छैन ।
प्रधान सेनापति प्रकरण त सरकारले नै नपाकेको घाउ कोट्ट्याई कोट्ट्याई पल्टाएको सैन हो । आफैँले रचेको चक्रब्यूहमा माओवादी फसेको मात्रै हो । प्रतिपक्षी वा विदेशीलाई सरकारले नै विरोध र हस्तक्षेपको मौका दिएको हो । पहिलो त अहिले कटवालालाई कटाएर कुनै लंका जितिनेवाला थिएन । प्रधान सेनापति हटाउने सरकारको अधिकारको छ भने विपक्षीको सहमति किन चाहियो कुन ऐनमा लेखेको छ र प्रधान सेनापतिमाथि कारबाही गर्दा विपक्षीको सहमति लिनुपर्छ भनेर काम गर्ने ढंग बुद्धि र हुति चाहियो त नि ।
महंगीले बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीय र अन्य उपाय अपनाए जनताले जयजयकार गर्नेछन् । लोडसेिडंग घटाए सबैले धन्य भन्ने छन् । माओवादीले विद्रोहकालमा भत्काएका कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका झोलुंगे पुल माओवादी कार्यकर्ता नै लगाएर मर्मत गरिदिए कति राम्रो काम हुन्थ्यो । बाटो पाउनेले कति गुन मान्ने थिए
स्वास्थ्य चौकीका लागि किनिएको औषधि कम स्तरको परेछ । कमिसन खानेलाई कारबाही गरेर गुणस्तरको औषधि दिनसके सबैले सराहना गर्नेछन् । पाठ्य पुस्तक बेलैमा पठाइदिए बालबालिका खुसी भएर प्रचण्ड अंकल जिन्दावाद भन्नेछन् । माओवादी लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गरे उठीवास लागेका निरिह विस्थापितले जय मनाउने छन् । बाल सैनिकलाई मुक्त गरेर त हेर संसारभरका बालअधिकारवादीले स्यावास् भन्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान टक्य्राउने छन् ।
आपुनो र राष्ट्रको मर्यादा ख्यालै नगरी राजदूतहरुलाई जहिले पनि भेट्ने नगरेको भए तिनले हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्थे र लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रकि्रया खलबलिन नदिएमा मानव अधिकारको सम्मान गरेमा विदेशीले बोल्ने बाटै पाउने छैनन् । अनि के भनेर दिने दबाव ।
जनताको भलो गरे मनमा शान्ति हुन्छ । यसैले राम्रा काम गर । शान्ति खोज्न रिसोर्टमा जान पर्दैन । पुष्पकमल दाहालले अवसर पाएका छन् - आफूलाई नमिटाई सुख पाउने
Posted by Govinda at 5/03/2009 12:18:00 PM No comments: